သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း6months ago #7
ဒီတော့ဟဲလိုလူတိုင်းအတွက်။ ငါ့နာမကိုဒါဝိဒ်သည်သည်နှင့်ငါအသစ်ကဖိုရမ်မော်ဒီမိပါတယ်။ ငါကန်-ချွတ်အချို့လှုပ်ရှားမှုဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖွင့်ဖို့နဲ့သင်တို့ရှိသမျှနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: rikoooo, PADA52, ricbru, txrace
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း6months ago #14
အ Rikoooo အသင်းအတွက်လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်,
I'am Erik Rikoooo.com ၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်မန်နေဂျာ။
ငါသည်ဤသည်သင်၏ဖိုရမ်ဖြစ်ပါသည်, ဤနေရာတွင်သင်ရှိသည်ဖို့တကယ်ပဲကျေနပ်မိပါတယ်။ သငျသညျသူဌေးကနေ
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း6months ago #15
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမကိုအမှီ Aan ဖြစ်ပါသည်
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း6months ago #16
ထို့ကြောင့်ဝေးသင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အများကြီး, အများကြီးပိုရေးသားချက်များနှင့်ဒီမှာအနာဂတ်အတွက်ပိုပြီးလှုပ်ရှားမှုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း5months ago #35
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏နာမည်အားလုံးသည်တယ်ရီ (FCAIR) ကျွန်ုပ်သည်အငြိမ်းစားယူအက်ဖ်အက်ဖ်အက်ဖ်စီအကြီးအကဲဖြစ်သည်။ ရုံစိတ်ဝင်စားတယ် FSX နှင့် Sim နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ပျံသန်း။ ဂရိတ် site အသစ်, ကြောက်မက်ဘွယ် downloads ။ လူတိုင်းပျော်ရွှင်စွာပျံသန်း
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: rikoooo, Gh0stRider203
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း5months ago #36
မင်္ဂလာပါ - ငါဗြိတိန်၏တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှဆရာယောဟနျပေါ့။ အငြိမ်းစားအခုတော့ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ် Simulator ကိုတိပ်ခွေနေဖြင့်တင်ဆောင်တစ် ZX81 အပေါ်ကို run နှင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အတွက်လုပ်ကွက် A နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု B ကိုအကြားပျံသန်းနေသောအလွန် blocky ဂရပ်ဖစ်ကကိုယ်စားပြုနေတဲ့ B737 (ကောင်းစွာ altimeter နှင့် asi) ၏ပါဝင်သည်ခဲ့သည် - နှငျ့သငျလြှငျ, မှန်သငျသညျမှာ "ရှုခင်း", C. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ ဟူ. ခေါ်ဝေါ်အခြားအနက်ရောင်မိတ်ဆွေအတွက် blobs ကိုမြင်လျှင်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မကို Microsoft ကိုငါ့လက်ရှိ I8086 မှတစ်ဦး 384 မှတဆင့် 486, 7, Pentium, ပေါင်းအနည်းငယ်ပိုပြီးထံမှကွန်ပျူတာများအမျိုးမျိုးမှတဆင့်တိုး, ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်သော Flightsim ခဲ့ပါတယ်။ မရှိတော့လက်ရှိကြောင့်ဒီနေရာမှာဗြိတိန်တွင်ပျံ၏ကုန်ကျစရိတ်ရန် - ငါ 152s နှင့် PA28s အပေါ်တရာနာရီစုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်သောပေါ်မှာပုဂ္ဂလိကလိုင်စင်ရရှိပါသည်။ ငါ့သားလည်း, ထို Flightsims အသုံးပြုတဲ့ bug ကိုလေပျံသန်းဖို့သင်ယူနှင့်ယခု (အစစ်အမှန်) အပေါ်သူ၏ခါးပတ်အောက်မှာ 4000 နာရီနှင့်အတူ A319 / 320s သည်သူ၏ဗိုလ်ကြီးရဲ့လက်မှတ်သွားမယ့်အကြောင်းပါ။ အလွန်အထင်ကြီးသောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနေရီကျွန်းစုရှုခင်းအားဖြင့် Rickoooo အမှတ်မထင် - အဘို့ဤမျှလောက်များစွာသောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း။ ဂရိတ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ 50 မိုင်ထက်မပိုနထေိုငျခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာမကျြနှာကိုမြင်သူတို့ဘာသာစကားငါ၏နားလည်မှုဝေးကောင်းသောထံမှဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: rikoooo, alogie
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် viscount.
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း5months ago #37
, FCAIR နှင့် viscount မင်္ဂလာပါ
သင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်သစ်ဖိုရမ်မှကြိုဆိုပါတယ်, ကျနော်တို့ကအရမ်းစိတ်အားထက်သန်ဒီမှာသင်ရှိသည်ဖို့ပျော်အသစ်သည့်အကြောင်းအရာများ post နှင့်ရပ်ရွာမှအကူအညီတောငျးဖို့တှနျ့ဆုတျပါဘူး။ သင်ကအကြီးအဖြစ်လိမ့်တခြားသူတွေကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်လည်း, သင်၏အသိပညာကဒီမှာအရမ်းကြိုဆို, ငါတို့သည်ဖိုရမ်အတွက် posted အပေါ်ဒီတော့သင်ခန်းစာတွေ, လဲ tutorial နှင့်ပျံ, အခြို့ကိုဘယ်လို-ရန်ရှိသည်မှကိုချစ်လိမ့်မယ်။ တိုင်းအလှူငွေရပ်ရွာပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: viscount, FCAIR
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း5months ago #39
ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းသားဖြစ်သကဲ့သို့အရင်တုန်းကကဲ့သို့ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အားလုံး၏အကောင်းနှင့်အထွက်ရဖို့ငါ့ကိုနည်းနည်းယူလိမ့်မည် FSX ဒါပေမဲ့အချိန်မရွေးငါတစ်စုံတစ်ဦးကဒါဟာငါ့ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အဘို့ကြီးစွာသောအပျြောအပါးဖြစ်ရလိမ့်မည်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း5months ago #44
နောက်တကြိမ်, Rikooo မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
သငျသညျအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ3နှစ်ပေါင်း5months ago #153
Hiya ရဲ့, ငါ့နာမကိုမျက်နှာပြင်အမည် PAYSON ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနောက်ကျော Ubisoft ရဲ့ Sturmovik IL2 ၏အသုံးမိတ္တူဖို့ခြိနျးတှေ့ယခုအတော်လေးခဏကွန်ပျူတာရေး Simulator ကိုသုံးပြီးခဲ့ကြရတယ်။ (တကယ်တော့သူတို့ဂိမ်းအတွက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ခဲ့တဲ့တိုက်လေယာဉ်တစ်ဦးယာဉ်သူတို့နှင့်အတူကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါသည်လည်း Ubisoft ရဲ့ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တိုက်ခိုက်ရေး Sims ကစားအချို့အရံပစ္စည်းထုတ်ဝတ်ဆင်။ ငါ Tank ၏ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အကြောင်းကို 10 နှစ်ရက်နေ့မှာပြောင်းရွှေ့ WarBirds အတွက်5နှစ်ရက်နေ့တွင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ပဲကစား။ (စျေးကြီးရရှိသွားတဲ့) ငါကိုအသုံးပြုပါတယ် FSX အကြောင်းကို 8 သို့မဟုတ်9နှစ်ပေါင်းနှင့်သူတို့၏ format နဲ့အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ ငါနေဆဲ WoT နှင့် Ubisoft ဆဲ shoot-em-Up နှင့်အတူပါဝင်တာပါ။ အခုဆိုရင်သင်တို့ကိုငါရှေးရှေးအကြောင်းကိုအထဲကတွေ့သောကြောင့်ပျံသန်းဖို့လေယာဉ်၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောပါပဲ။
0.244 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်